Biko nye aka n'okwu FMC :-) 5 ọnwa 4 izu gara aga #1598
Agụọla "FMC Readme.txt" ma soro usoro niile. Agbakwunyewo "tinye windo ọhụrụ" ma “dochie windo GPS dị ugbu a” site na iji ọdịnaya faịlụ FMC. Usoro nhazi ọ bụla adịghị enye m FMC. Ahụrụ m na koodu "737 Classic" windo na koodu maka FMC, mana ahụghị bọtịnụ maka ya na nlele F10 / 2D. Gbalịrị itinye akara koodu FMC na ngalaba koodu GPS, mana, ọ nweghị ihe na-apụta. Ọ ga-enwe obi ekele maka onye dụrụ m ọdụ ebe m na-aga adịghị mma. Ikekwe nseta ihuenyo nke faịlụ editọ gị nke m ga-eji tụnyere? Daalụ .....